यी राशि भएका जोडी कहिलै छुट्टिदैनन्, तपाई पनि पर्नुभयो की ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी राशि भएका जोडी कहिलै छुट्टिदैनन्, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
राशी अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वभाव फरक फरक हुने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार प्रेम सम्बन्धमा तपाईको पार्टनरको राशि कुन भन्ने बारे खास ध्यान राख्नु पर्दछ। यदी पार्टनरको राशि तपाईको राशिसँग मिल्छ भने तपाईको प्रेम सम्बन्ध निकै राम्रो हुने गर्दछ ज्योतिषशास्त्र अनुसार जानिराख्नुहोस् कुन राशिका व्यक्तिको हुन्छ राम्रो जोडी
मिथुन र तुला-यी दुई राशि भएका जोडि एक अर्काका लागि निकै राम्रो मानिन्छ। फिजिकल होस् वा मेन्टल, धेरै कुरा दुबैको एकदमै मिल्ने खाले हुन्छ। सिंह र तुला-यी दुबै राशि भएका व्यक्ति सामाजिक रुपमा जोडिन जोडिन मन पराउने खाले हुन्छन्। मानिसका बीचमा मुख्य आकर्षकका रुपमा देखिने गर्दछन्। मेष र कुम्भ-यी दुई राशि भएका जोडि एकअर्काप्रति निकै आकर्षीत हुने गर्दछन्। दुबैले हरेक समय एक अर्कासँग साथमा रहन मन पराउने गर्दछ। वृष र वृश्चिक-यी दुई राशि भएका व्यक्तिका बीचमा कहिलै पनि नेतृत्वका विषयमा कुनै झगडा हुन्दैन्। अर्काको निर्णयको सम्मान गर्ने गर्दछन्।
वृष र कन्या-यी दुई राशि भएका व्यक्तिलाई घर परिवार र स्थितरता आवश्यक हुने गर्दछ। त्यसैले यी दुई राशि भएका जोडी एक अर्कालाई बुझने खाले हुन्छन्। सिंह र धनु-धनु राशि भएका व्यक्तिलाई सिंह राशि भएका व्यक्तिको आत्मविश्वास एकदमै मन पर्ने गर्दछ। र यी दुबैले एक अर्कालाई समय समयमा सहयोग गर्ने गर्दछन्।
कन्या र मकर-यी राशि भएका व्यक्ति एक अर्काप्रति इमान्दार हुने गर्दछन्। र आपसमा कहिलै झुट नबोल्ने खाले हुन्छन्। यिनीहुनेको सम्बन्ध निकै बलियो हुने गर्दछ। मिथुन र कुम्भ-यी दुई राशि भएका व्यक्ति एक अर्काप्रति निकै आकर्षक हुने गर्दछन्। साथै जीवनका हरेक उतावचडाव सँगै मिलेर पार गर्ने गर्दछन्।